Gabadh dacwad la fuushey nin aabaheed qasab ku siiyay magaalada Laascaanood - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gabadh dacwad la fuushey nin aabaheed qasab ku siiyay magaalada Laascaanood
Waxa maanta maxkamad ku taal magaalada ay u fariisatey dacwad soo socotey muddo gaaban oo ay soo gudbisay gabadh 14 jir ah taas oo ahayd gabadh soo dacweysay nin aabaheed qasab ku siiyay.
Ninka ayaa xilliga uu Aabaheed u guurinayay waxa ay aheyd sanadkii 2015-kii xilligaas oo ay jirtay Da’da 11 halka Ninka loo guuriyey uu isana jiray da’da 30 sano taas oo keentay in Gabadha ay ka cararto Hoygii loo geeyey ee magaalada laas-Caanood, isla markaana ay aaday magaalada Hargeysa.
Xaawa Cabdi Aadan ayaa 23kii Bishii la soo dhaafay waxaa ay dacwad u gudbisay Maxkamada magaalada laas-caanood, iyada oo kasoo horjeeda Ninka ka da’da weyn ee uu Aabaheed ku guuriyey,waxaana Maxkamada Maanta oo Khamiis ah ay go’aamisay in uu furo Ninka lagu daray oo lagu Magacaabo Iftiin Cabdi.
Xaawa Cabdi Aadan oo la hadashay Warbaahinta ayaa waxaa ay sheegtay in dacwada ayna u gudbin naceyb ay u qabto Ninka loo guuriyey balse aysan gaarin da’da guurka.
Guddoomiyaha Maxkamada degmada laas-Caanood Cumar Sheekh Maxamed Aadan ayaa sheegay in kiiska dacwadaas ay soo gaarsiisay Xaawa Cabdi Aadan oo ah Gabar yar kana dacwooneysay Ninka qasabka loogu guuriyey, waxana uu sheegay in Gabadha la mehriyey, iyada oo aan qaan gaarin,sidoo kalena aan lala socod siin.
Waa muhiim in gabdhaha yar aan guur lagula deg degin laga yaabe in ay jir ahaan gaartey laakiin caqli ahaan ayna gaarin, weliba ay u dheertahay in lagu cadaadiyo.